Warshadda Iftiinka Qorraxda - Soo -saareyaasha Soo -saaraha iyo Soo -saarayaasha Shiinaha
Tuulada Bannaanka ah ee Nidaamka Nalalka Cadceedda Cagaaran ee Beerta
1. Kontoroolka fog;
2. Dareenka Dhaqdhaqaaqa PIR ee Kaydinta Tamarta;
3. Iftiinka La -habeyn karo iyo Waqtiga Waqtiga;
4. Tiknooloojiyadda ALS + VFT + TCS ee Iftiinka Habeenkii oo dhan xitaa Maalinta Daruuraha ama Roobka.
Codsiga: Barxadda/Beerta/albaabka garaashka/derbiga/bakhaarka/deggan/albaabka/jirridda baxsadka/waddada iwm
S5 taxane Solar Light
nalalka cadceedda Astaamaha ugu muhiimsan:
1. Alaabta ceyriinka ah iyo qaabku waa isku-dhafan god-dhimis, sidaas darteed nalalkeenna ugu sarreeya biyuhu waa IP66.
2. Waxaan doorannaa jiil cusub SMD dhalaalaya oo dhalaalaya, lumen chip chip waa 160LM/W, iftiinka oo dhan 120LM/W-140LM/W.
3. Xisaabiyaha korontada ku shaqeeya, waxaan u isticmaalnaa kontoroolaha MPPT si aan u maareyno hufnaanta nalalka.
4. Bateriga waxaan sidoo kale qaadannaa nidaamkayaga BMS si aan u hagaajino kartida batterigayaga.
Iftiinka iftiiminta LED Marka laga reebo nalalka ugu muhiimsan, iftiinka gaarka ah ee deegaanka wuxuu qurxiyaa agagaarka. Dayactirka Horudhaca Way fududahay oo waa sahlan tahay in lagu hayo dhinaca hore. Alaab ceyriin ah oo aad u sarreysa Guryaha shubka aluminium ee cadaadiska sare leh, oo leh naqshad dhumuc weyn leh, oo leh kuleel ka sii fiican iyo karti ka-hortagga daxalka, iyo cimri dherer. Qaab dhismeedka la xoojiyay wuxuu u adkaysan karaa 4 jeer cufkiisa. Naqshadeynta indhaha sare ee xirfadeed Qaab dhismeedka agagaarka ...
Shirkad Weyn waa inay had iyo jeer fiiro gaar ah siisaa nashqad kasta oo faahfaahsan, oo ruuxa farsamada waa in lagu buuxiyaa geedi socodka naqshadeynta oo dhan iyo soosaarka ballaaran.